ဂူဂဲလ်၊ ၎င်း၏မိုနိုပိုလီ၊ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားကိစ္စများ | Linux မှ
ဂူဂဲလ်၊ ၎င်း၏မိုနိုပိုလီ၊ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားအရာများအကြောင်း
ငါမှားတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်အလွန်ပုဂ္ဂလိကထင်မြင်ချက်ကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေချင်ပေမယ့်အဲဒါငါထင်တယ်။ Google ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည် (သင့်မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်) un တဉီးတည်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဝက်ဘ်ပေါ်မှာလား သူသာဆိုရင် တဉီးတည်းလုပ်ကိုင်ခွင့် de Google ဤသူသည်အဘယ်သို့လျှင် တဉီးတည်းလုပ်ကိုင်ခွင့် de Google အခြား။
ငါများစွာသောလူကစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းမြင်ကြပြီ Google အင်တာနက်ကိုအများစုထိန်းချုပ်နိုင်ပေမယ့်တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင် လက်ဝါးကြီးအုပ် como Apple o Microsoft က။ သင်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Google အသုံးပြုရန် Gmail၊ Google Docs၊ Gtalk၊ Google Reader၊ Google Earth... စသည်တို့? ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့ပေးရမည့်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းကားအဘယ်နည်း။ လူအများစုအတွက်ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးမှာဤထုတ်ကုန်အများစုသည်အလွန်ကောင်းသည်။
1 Google က Chrome ကို
con Google က Chrome ကို, ၏စျေးကွက်အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်သည် Browsersဒါကြောင့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိအဖြစ် က Internet Explorer ။ ဘာမှားလဲ
Google က Chrome ကို ၎င်းသည်၎င်း၏ကောင်းကျိုးများအတွက်လူကြိုက်များမှုများစွာကိုစီမံနိုင်ခဲ့သည့် browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့စုံလင်မှုမရှိခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာများစွာကိုလွဲချော်ခဲ့သည်။ Firefox ကို။ ဒါပေမယ့်သူကဘယ်နေရာထောင့်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာငြင်းစရာမလိုပါဘူး Firefox ကို ဝင်လို့မရဘူး မြန်နှုန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရိုးရှင်းမှု၊ ဤဘရောင်ဇာကိုသတ်မှတ်ထားသောနာမဝိသေသနများမှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိအဝေးဆုံးနေရာများကိုအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံး ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သာရည်ရွယ်သည်။
နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲ အနာဂတ် (ငါစိတ်ကူးမကြိုက်ပေမယ့်) အရာအားလုံးထဲမှာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် မိုဃ်းတိမ်ကို။ ဖြစ်နိုင်စရာ Google မနက်ဖြန်ရှိမယ် လက်ဝါးကြီးအုပ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်၌စုစုပေါင်းဖော်ပြပါမည်၊ သို့သော်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ သီးသန့်လုံခြုံရေး သငျသညျအစဉ်အမြဲအန္တရာယ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ရုံအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပါ။ Google၊ Facebook၊ Microsoftအသုံးပြုသူသည်၎င်းတို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများကိုပို့ရန်အရာအားလုံးကိုစီမံသည်။
သို့သော်အားလုံးသော်လည်းမပျောက်ပါ Chrome ကို ဥပမာအားဖြင့်၊ Google ငါတို့မရှိဘဲကတည်ရှိသိ ခရိုမီယမ် o SRWare သံ သူတို့မကျင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားသူများအတွက်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် မိုဃ်းတိမ်ကို (ဥပမာ Gmail) ကျနော်တို့သိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုဆက်လုပ်နေတုန်းပဲ။
ထို့ကြောင့်ဤပြissueနာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ၊ Google အနည်းဆုံး။ ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ် ဆိုоп ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားကစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်တယ်။ စဉ်တွင် Google ငါ့ကိုမတောင်းဆိုဘဲကောင်းသောထုတ်ကုန်များကိုပေးပါ (ပုံ) အဘယ်အရာကိုမျှပြန်လာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ငါ့ကိုအတင်းအကျပ်, ငါ့အားဖြင့်ဒဏ်ငွေပါပဲ။ အင်တာနက်မရှိဘဲမည်သူမဆိုစိတ်ကူးနိုင်သလား Saint Google?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ဂူဂဲလ်၊ ၎င်း၏မိုနိုပိုလီ၊ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားအရာများအကြောင်း
တစ် ဦး လက်ဝါးကြီးအုပ်သည်အဘယ်အရာ၏တင်းကျပ်သောသဘောအရ http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolioဂူဂဲလ်မဟုတ်ဘူး
လူများ၏ကြောက်စိတ်ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကြီးမားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအားယုံကြည်မှုမရှိစေဘဲ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမီသောပုံစံဖြင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖကဲ့သို့ပင်ရုတ်တရက်စည်းကြပ်မှုဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမင်းသဘောတူတယ်။ google ထုတ်ကုန်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဘယ်သူမှသူတို့ကိုဘယ်သူမှအတင်းအကျပ်မခိုင်းဘူး။ အကောင်းဆုံးကသူတို့ (အခုထိ) အခမဲ့ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုပျော်မွေ့ပြီးဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုမစိုးရိမ်ကြနဲ့။
ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်ထုတ်ကုန်များစွာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသုံးပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုအချက်အလက်များဖြင့်လွယ်ကူစွာထားရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိ၊ ပထမအချက်မှာကျွန်ုပ်ဖုံးကွယ်ရန်ဘာမျှမရှိသော၊ အမှန်တရားမှာကမ္ဘာပေါ်တွင် privacy သည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်၊ အရာရာကိုခြေရာခံသည်
privacy ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတွေကို Facebook ကြားတာကသူတို့ဘောင်းဘီရဲ့အရောင်ကိုပင် ၀ တ်ဆင်သည်။
Gmail, Google Docs, Gtalk, Google Reader, Google Earth စသည်တို့ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Google ကဘယ်လောက်တောင်းပါသလဲ။
အဆိုပါမှော်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ ... ¬¬
သငျသညျ reggaeton ကိုနားထောင်သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ porn စောင့်ကြည့်လျှင်သူလည်းလေ့လာသင်ယူအဖြစ်
တူညီတဲ့ပုံပြင်နှင့်အတူ fuck ဆိုတဲ့
ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးသူတို့ပတ်ပတ်လည် fuck ဆိုတဲ့ကြဘူး !! ငါတို့လူဟောင်းကိုရှာတွေ့လားကြည့်ရအောင်
ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် အကယ်၍ ပေးသည်မှန်လျှင် san google ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်တိုက်ထုတ်သင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ပံ့ပိုးပေးသူများထံမှကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုချိုးဖောက်သည်။ ထို့ကြောင့် privacy ရှိသည့်နေရာ၊ ၎င်းသည်မုသားဖြစ်သည်၊ နှုတ်ထွက်စကားမှသည်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုအထိ၊ privacy ရှိသည့်နေရာတွင် privacy တည်ရှိမှုကိုရပ်စဲလိုက်သည်။
သူတို့ duckduck သွားကြကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ကြသည်
စူပါလုံခြုံသောစကားဝှက်များကိုမည်သို့ထုတ်ယူ / ထုတ်လုပ်နိုင်သည်